Enwere Otu Magazin M Na-akwụ Maka: | | | | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 26, 2009 Mọnde, Jenụwarị 26, 2009 Douglas Karr
Ndị enyi m maara na m bụ snob akwụkwọ. Enwere m mmasị na akwụkwọ mkpuchi. Onweghị ihe dị ka mgbape nke azụ nwanyị na-amaghị nwoke na isi nke ibe na-acha odo odo nwere ink ọhụrụ na ya. A ọhụrụ akwụkwọ ele mgbe niile na-eche dị ka a onyinye m… na ọ bụ m, niile m!
Ana m arụ ọrụ na snobbishness m siri ike, ọ bụ ezie! Enweghị m ike ijide onwe m ma m nwee obi amamikpe na akwụkwọ niile na-agbakọ gburugburu ụlọ m nke kwesịrị ka ndị ọzọ na-achọghị ịgụ akwụkwọ siri ike. Aga m aga ebe ahụ, ana m ekwe nkwa. N'ime otu izu ma ọ bụ karịa, aga m agba ọsọ asọmpi wee nye igbe igbe mkpuchi siri ike a na-agụtaghị… ka ọ dị na plastik ha. Jidesie ike!
Na agbanyeghị… dị ka m hụrụ akwụkwọ akụkọ n'anya, akwụsịrị m ịgụ akwụkwọ akụkọ ọtụtụ afọ gara aga. Anọ m na-agwa John Ketzenberger, onye na-ede akụkọ Star Business (pun bu n'obi) banyere ya otu izu ma ọ bụ karịa gara aga. Akwụsịrị m ịzụta akwụkwọ akụkọ ahụ mgbe akwụkwọ akụkọ gbanwere site na ngwaahịa gaa na nzacha n'etiti mgbasa ozi.
Akwụsịrị m ịzụ akwụkwọ akụkọ mgbe akwụkwọ akụkọ malitere ịkpọsa ọtụtụ Kupọns nke mbipụta Sọnde nwere karịa akụkọ ole ha ga-ekpughere. Ọ ka na-ewute m. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka kọlụm John, echeghị m na m ga-agụ Indianapolis Star online, ma ọ bụ.
A ka nwere otu mbipụta akwụkwọ na enweghị m ike ichere ịtọpụ ma meghee, ọ bụ ezie… na nke ahụ Magazin Wired. M kwụsịrị cribdenye aha afọ gara aga mgbe ha gbanwere nnukwu foto, obere ebipụta… mana afọ ole na ole gara aga abụrụla ihe ịtụnanya. Ọ dịghị ihe ọzọ dị mma - edemede ọ bụla bụ onye na-atụgharị peeji. Enwere mbipụta ole na ole nke anaghị m eripịa site na mkpuchi ruo na mkpuchi. Agụrụ m n'afọ gara aga ma chọpụta na m blog banyere isiokwu Wired otu ugboro kwa ọnwa 2 ruo 3.
Magazin A Wired Magazine:
N'ime GPS mgbanwe: Ngwa 10 nke na-eme ka ọtụtụ ebe
Ndị isi oche ndị isi: Ndi Obama nwere ike ịmalitegharịa White House?
Atụmatụ ahụ iji gbuo Google
Mee N'onwe Gị DNA: Otu Nna Otu Nwa Mgbalị Hackbanye anataghị ikike nwa ya nwanyị
Onye Ọchịchịrị nke Ọchịchị nke Broadband na-anwa iji dozie foto Comcast
Ebe ọ bụ na isiokwu ndị a dị na ntanetị ugbu a, a ga m ama gị aka ka ị gụọ isiokwu ndị a. Ọ bụrụ na ụbọchị gị juputara n'ịgụ blọgụ na ị bụ otu n'ime ndị folks ahụ na-eche ihe mere anyị ji achọ ndị nta akụkọ ọzọ, otu n'ime isiokwu ndị a kwesịrị ịgbanwe obi gị. Nlekọta na edemede nke edere n'ime nke ọ bụla n'ime ha ga-amafe na ihuenyo page er….
Mgbe m chere echiche banyere ego ole m kwụrụ maka akwụkwọ mkpuchi siri ike, yana ego ole Magazin Wired na - eche - ihe kpatara na anaghị m akwụkwu ụgwọ maka ndenye aha m. Enweghị otu magazin dị n'ahịa na-adọrọ uche m ma na-akọ akụkọ dị ukwuu na mpaghara teknụzụ yana Wired.
Enweghị m ike ichere ruo ọnwa Wired ọzọ!
Tags: àgwà ịzụ ahịausoro nkwukọrịta
Jan 27, 2009 na 3: 02 AM
Mụ onwe m hụrụ n'anya Wired mana enweghachila m mmekọrịta ọzọ. M na-agụ ya ugbu a.
Jan 29, 2009 na 2: 13 AM
Wired bụ naanị nke m rapaara. Abụ m onye gamer ezie ma enwetala Game Informer n'elu afọ 2 gara aga ma ọ bụ karịa, mana nke ahụ bụ naanị n'ihi na ọ na-abịa na Game Kwụsị ego kaadị.
Jan 29, 2009 na 11: 37 AM
Ndị na - agụ blọgụ anyị (www.inmedialog.com) mgbe niile ga - amata na anyị bụ ndị na - akwado ọkaibe na akwụkwọ akụkọ n'agbanyeghị etu esi ede ya. Ana m enwe ọmịiko n'ahụ ndị na-aghaghị ịta ahụhụ akwụkwọ akụkọ nke obodo ma ọ bụ nke atọ kwa ụbọchị; nke ahụ bụ eziokwu ebe a na Ottawa, Canada, ebe oke nkịta obodo bụ okwu dị njọ nke ịgba ọsọ mgbasa ozi ụlọ ọrụ na-agba ọsọ na ala.
Anyị nwere ihu ọma, na agbanyeghị na anyị nwere akwụkwọ akụkọ mba kwa ụbọchị, Globe na Mail, nke na-efufu n'ọnụ ụzọ m n'isi ụtụtụ ọ bụla. Ọ dịla n'ihu na-azụ chọrọ ọgụgụ na ndụ m maka ihe karịrị afọ 25 enwere ya. Ọ bụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ Bekee kachasị mma n'ụwa.
Readinggụ Globe kwa ụbọchị na-ahapụ m oge dị ka oge maka oge ndị ọzọ dị ka ị addictionụ ọgwụ ọjọọ ị na-ekwupụta n'onwe gị, Douglas, mana m na-ekerịta ịhụnanya gị maka Wired. Aghọwo m akwụkwọ akụkọ teknụzụ m mbụ ebe azụmaahịa 2.0 gara n'okpuru. (I nwere ike gụọ obit m maka 2.0 ebe a: http://inmedialog.com/index.php/archives/a-business-20-titan-bows-out/) O nwere ọtụtụ ihe gadget-na-geek na obere azụmaahịa kụrụ ya karịa 2.0, mana edemede a pụtara ìhè, njirimara ndị a na-eme nke ọma ma na-eche echiche ma oge m mechara ya, ọ bụla Isiokwu ahụ nwere ọtụtụ akụkụ dị na peeji a na-ehulata iji chetara m ka m lelee n'ihu n'ime ihe ọ bụla edere banyere ibe ahụ.
Anyị na-enweta ọtụtụ akwụkwọ akụkọ nyefere n’aka ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị lekwasịrị anya kwa izu; Ikuku bụ naanị otu onye ọrụ na-nyere iwu ga-etinye m oche ozugbo ọ bịarutere.
Jenụwarị 29, 2009 na 12:24 PM
M wee na-arụ ọrụ na The Globe na Mail banyere 5 ma ọ bụ 6 afọ gara aga na-ekweta na gị ntule. Globe, n'oge ahụ, na-echegbu onwe ya banyere iru ya ndị na-ege ntị ziri ezi… Ọ bụghị naanị iru onye ọ bụla ga-azụta akwụkwọ akụkọ ahụ. Ha zere iwepu ego - ihe a niile nyere akwụkwọ akụkọ uru bara oke uru. Globe na Mail nwere ike ịkarị Wall Street Journal dịka akwụkwọ akụkọ azụmahịa kacha mma n'ụwa. Ọ bụ nnukwu akwụkwọ na nnukwu nzukọ!